Di Maria iyo Sami Khedira oo lasheegay inay katagayaan kooxdooda | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Di Maria iyo Sami Khedira oo lasheegay inay katagayaan kooxdooda
Tababaraha kooxda Real Madrid Carlo Ancelotti ayaa si cad oo aan ganbasho lahayn uga hadlay arinka Di Maria iyo Sami Khedira maruu qabtay shirkiisa jaraa,id ee ka hor kulanka ay Bari laciyaari doonaan kooxda Atletico Madrid.
Ancelotti ayaa sheegay in kadib kulankii ku soo idlaaday 1-1 uu si cad u sheegay Di Maria in uu san doonayn inuu sii joogo kooxda Real Madrid wuxuuna intaa ku daray inay heshiis cusub hordhigi doonaan mar kale.
Ancelotti ayaa sidoo kale ka hadlay arinka Sami Khedira wuxuuna sheegay in laacibka ree Germany uu diiday inuu heshiiska u kordhiyo kooxda lakiin wuxuu intaa ku daray in laacib kaan uu san wali ka codsan kooxda in la fasaxo.
“Di Maria waa laacib wayn waxaana ku rajo waynahay inuu nala sii joogo, lakiin kadib kulankii Super Cup-ka wuxuu diiday inuu heshiiska noo kordhiyo wuxuuna si cad noogu sheegay inuu doonayo inuu baxo”.
“Di Maria wali waa laacib Real Madrid ah, waxaana u soo bandhigi doona heshiis kale maalmaha nagu soo aadan waana arki doona waxii dhaca”.
“Khedira xaaladiisu waa mid ka duwan tan Di Maria, hal sano ayaa uga haray heshiis kiisa mana uusan codsan in lafasaxo lakiin wuxuu diiday inuu heshiis cusub kooxda u saxiixo”.